‘भूगोलका पिता’ बुढाथोकी सरका आखिरी दिन
व्यक्तिवृत्त अनिता भेटवाल
नेपालमा भूगोल शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहमा विस्तार गरेका प्रा. जगतबहादुर सिंह बुढाथोकीले यसलाई प्राज्ञिक विषयका रूपमा स्थापित गर्दै आफ्नो अध्यापन कौशलबाट उम्दा विद्यार्थी उत्पादन गरे।
‘साउन्ड’ संसारका किशोर
कुन वेला रेकर्ड गरिएको आवाज कुन फिल्मका लागि आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले त साउन्ड इन्जिनीयर किशोर आचार्य भीडभाड होस् वा शान्त स्थान‚ जहाँ पनि रेकर्डर बोकेरै हिंड्छन्।
अनि १४ वर्षपछि अभिनयमा फर्किए विमल
यसअघि पनि आफ्ना सङ्कल्प तोडिसकेका विमलले यस पटक अभिनयमा नफर्किने भनी १४ वर्षअघि गरेका सङ्कल्प तोडेका छन्। उनी पल्पसा क्याफेबाट नाटकको अभिनयमा फर्किएका छन्।
एक कलाकारको पर्यावरण चिन्ता ‘पुतली सर्जक’ को उपमाले चिनिने मिलन राईको कला यात्राले लामो दूरी तय गरिसकेको छ।
फिल्म निर्माताको चरा मोह पेशाले फिल्म निर्माता भए पनि सानैदेखिको चराप्रतिको आकर्षणले सुदर्शन कार्कीलाई फोटोग्राफीतिर डोर्‍याएको छ।
बीपीको पर्चा लेखनबाट जन्मिएका लेखक कृष्णविक्रम भारत प्रवासनमा रहेको वेला बीपी कोइरालाले पर्चा लेख्न सिकाएसँगै लेखनतिर लागेका कृष्णविक्रम नेम्वाङ यतिवेला भने एशियाकै प्राचीन इतिहासमा डुबेका छन्।
निर्मल पुर्जाको साहस र शान ‘प्रोजेक्ट पसिबल’ ले संसारसामु ३८ वर्षे पर्वतारोहीको कीर्तिमान मात्र प्रस्तुत गरेन, नेपालीलाई आफ्ना सिरानका हिमालहरूप्रति आकर्षित पनि गराएको छ।
संसारभरका मिडियामा छाएका यी नेपाली युवा, जसले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा जातीय विभेद विरुद्धको नीति बनाउन बाध्य पारे जातीय विभेदको रापले नेपालदेखि अमेरिकासम्म आहत भएपछि प्रेम परियारले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा गरेको पहलकदमीले नीतिगत परिवर्तन गराउँदै जातीय असमानताको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिएको छ।
बालबालिकाका जटिल तथा विशेष दीर्घरोगका एक्ला विशेषज्ञ इम्युन गडबडी र बाथजन्य रोग बालबालिकामा बढिरहेको छ। तर, यो रोगका बारेमा बालरोग विशेषज्ञदेखि स्वास्थ्य प्रणालीसमेत अनभिज्ञ छ।
हुक्सले कोरेको नारीवादको बाटो नारीमाथि पितृसत्ताले थोपरेको दमन र शोषणको परम्पराभेदनलाई आफ्नो लेखनको ‘ट्रेडमार्क’ बनाउँदै सीमान्त समुदायसम्म पुग्नु हुक्सको उद्देश्य थियो।
नेपाल चियाउने फरक चश्मा बाह्मण-छेत्री बाहेकका समुदायमा मात्र अध्ययन केन्द्रित गर्ने अन्य मानवशास्त्रीको भन्दा फरक सापेक्षता दृष्टि देखाएका फिसरले यहाँका समुदायलाई बन्धुत्वको अवधारणाबाट पनि व्याख्या गरिनुपर्ने मान्यता राखे।
कुखुरा भुत्ल्याउने कामदेखि युनिसेफको अवार्डसम्म ११४ देशका १७ सय फिल्ममध्ये १३ मिनेटको यस लघु चलचित्र पहिलो भएको हो। खत्री भन्छन, “मुगुका बालबालिकाको आवाज देशले सुनोस् भन्ने आशा थियो, अब विश्वले थाहा पाउने भयो । यति ठूलो अपेक्षा गरेको थिइनँ।”
कला अनिता भेटवाल
कोभिड-१९ महामारीबीच भिजुअल आर्टिस्ट सुवास तामाङले तामाङ समुदायको इतिहास, स्मृति र पहिचान विश्वमाझ ‘काइतेन’ गर्दैछन्।
भास्कराचार्यका पर्याय नयराज
जीवन पर्यन्त इतिहास, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयको चिन्तनमा लागेका नयराज पन्तलाई भारतका प्रख्यात गणितज्ञ र ज्योतिषी भास्कराचार्यकै पर्यायका रूपमा चित्रण गर्दा कम होला, बढी हुँदैन।
यी थिए उत्तम नेपाली
मनैदेखि कलाकार थिए, उत्तम नेपाली। अमेरिका बसाइमा तीन पटक हृदयाघात हुँदा पनि अस्पतालका भित्ताहरू खाली खाली देखेर उनलाई चित्र बनाउन मन लाग्यो रे।
मनमोहनको सुरक्षाको जिम्मा पाउँदा... २०४८ सालको आम चुनाव अवधिभर सँगै हिँड्दा मनमोहनजीमा एकदम सादा जीवन पाएँ। जहाँ जे पाइन्छ त्यही खाने, यस्तो उस्तो केही नभन्ने। जस्तो ठाउँमा पनि सुत्ने। मसँग प्रायः चुनाव र पार्टीकै विषयमा कुरा हुन्थे।
चेतन कार्की : ‘माछा हाकिम’ देखि लोकसंस्कृतिका सारथिसम्म चेतन कार्की गाउँघरमा प्रचलित शिष्ट शैलीको दोहोरीलाई लोकगीतको उच्च विधा मान्थे। गीतको शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै गाउँका अपठित जनले उही लय, टेम्पो, मिठास र शिष्टता कायम गरेर प्रत्युत्तर दिनसक्नु चानचुने कुरा होइन भन्ने उनको बुझाइ थियो।
के थिइन् वानीरा ? लेखनमा सरलता, सहजता र सरसताका कारणले नै नेपाली साहित्यजगत्‌मा वानीरा गिरिको पाइलो माथिल्लो स्थानमा टेकिएको हो।
युआन लोङपिङ, जसले लाखौं भोकाको पेट भर्न सघाए सन् १९७० को दशकमा धेरै फल्ने हाइब्रिड धानको विकास गरेर संसारका असंख्य गरीबलाई भोकमरीबाट जोगाउँदै जीवन बचाएको श्रेय लोङपिङलाई जान्छ। यिनै लोङपिङ शनिबार संसारबाट बिदा भए।
बिगोनियाकी एक्ली वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञानमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएकी प्राडा संगीता राजभण्डारी नेपालकी एक मात्र बिगोनिया (मकरकाँचे) विज्ञ हुन्। त्रिवि वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा साढे दुई दशकदेखि प्राध्यापनरत उनलाई सबै मापदण्ड पुगे पनि राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण विभाग प्रमुख हुने पालोमा पाखा लगाइयो।
जसले पाकिस्तानको लडाकु विमान खसाए सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान लडाइँमा भारतीय सेनाले पाकिस्तानको एमआईजी १९ लडाकु विमान खसाएको थियो। त्यसरी विमान खसाउने व्यक्ति थिए, ७/११ जीआर (गोर्खा राइफल्स)का राइफलम्यान धनबहादुर राई (तामाङ)।
छिनको छिनमै चित्र ! हलमा जम्मा भएका दर्शकसामु ठूलो क्यानभास लिएर संगीतको मधुरो धूनसँगै उनका हात जादू गरेझैं नाच्छन्। पाँच सात मिनेट उनका हात बिजुली गतिजस्तै गरी चलेपछि असाध्यै सुन्दर चित्र तयार भइसक्छ।
माराडोनालाई नेपाल चिनाउने सुरेश दुई दशकअघि अर्जेन्टिना पुगेका ललितपुरका सुरेश केसीबाटै माराडोनाले नेपाल चिने, नेपाली झण्डा बोके। अर्जेन्टिनामा सुरेश नेपाल र नेपालीका प्रतिनिधि झैं बनेका छन्।
विश्वविद्यालयको मुहार फेर्दै डम्बर सर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङले थालेको संस्थागत र शैक्षिक सुधारको कामले विश्वविद्यालयकै मुहार बदलिंदैछ।
एउटा ज्योति, जो असमयमै निभ्यो ! नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्री, भरिया तथा तीर्थयात्रीको उद्धारमा प्रकाश अधिकारीले जति योगदान गरे, शायदै अरू कसैले गरे ।